UBUNGQINA BOSINDISO | Bible Baptist Ministries P.E.
By biblebaptistpe on June 6, 2017
iBhayibhile ithi kwabaseRoma 2:3-5 “Ucinga na ke, mntundini ugweba abo bazenzayo izinto ezinjalo, ube usenza kwazona nawe, ukuthi, uya kusisaba na wena isigwebo sikaThixo? Okanye ùyabudela na ubutyebi bobubele bakhe, nonyamezelo, nokuzeka kade umsindo; ungazi ukuba ububele bukaThixo bukusa enguqukweni? Ke ùthi, ngokuba lukhuni kwakho, nentliziyo yakho engenanguquko, uziqwebele ingqumbo, ngemini yengqumbo nokutyhilwa komgwebo onobulungisa kaThixo;”
Ubungqina bosindiso lwam buqala apha. Ndikhuliselwe ekhayeni labashumayele. Ndilivile iLizwi likaThixo lishunyayelwa ebomini bam qho ngeveki. Ndithe ke ndakufikelela kwiminyaka engamashumi amabini ananye, Ndandingasindiswanga. “Ndandibudela ubutyebi bobubele bukaThixo, nonyamezelo, nokuzeka kade umsindo wakhe.” Ndandingumntu, onentliziyo eqinileyo kwaye enganamonde, ndandiziqokelelela umsindo wakhe kum.”
Abantu abaninzi ngebatsho bathi ndingumntu olungileyo. Ndandithembekile kwiinkonzo zecawa. Ndikhule ndithobela abazali bam ngokwangaphandle. Ndiphile impilo yam ndingazange ndingene engxakini eyinyaniso.
Ndandibonakalisa inkolo. Xa ndandineminyaka esibhozo ubudala, ndaye ndathandaza ndacela uYesu ukuba andisindise. Ndayenza le nto kuba ndandiyazi ukuba abantu kwakufuneka basindiswe, kwaye nangenxa yokuba abahlobo bam abaninzi babesindisiwe. Kodwa iBhayibhile ayitsho ukuba ukuthandaza kuyasisindisa, iBhayibhile iyasixelela ukuba kufuneka siguquke, kwaye sikholwe kwiNkosi uYesu Kristu. Ezi zinto zombini zazingekabikho ebomini bam.
Xa ndandineminyaka elishumi elinesithathu ubudala, ndaye ndathandaza omnye umnye umthandazo, kwaye kwakhona ndacela uThixo ukuba andisindise. Ngeli xesha ndandisele ndive umyalezo othetha ngesiHogo, kwaye ndandisoyika ukuya phaya. Kodwa ke uloyiko lwesiHogo alonelanga ukuze umntu asindiswe.
Kwiminyaka esibhozo elandelayo ndaphila impilo yobuxoki, ndisenza ingathi ndisindisiwe. Ndizenza ingathi ungumKristu.
iBhiyibhile ithi kuLuka 19:10, “kuba uNyana woMntu weza kufuna nokusindisa oko kulahlekileyo.” Ngo 1999 uThixo waqala ukundifuna! Wasebenzisa intshumayelo ethembekileyo yeLizwi likaThixo, ebandleni lakhe. Wasebenzisa iimeko ezinzima ebomini bam, ezandenza ndama, ndazicikida umntu endandinguye, nendawo endandisiya kuyo. Kwakhona uThixo wasebenzisa impembelelo elungileyo, yokuzalwa ngokutsha kwenyaniso, kwabahlobo abangamaKristu, abandibonisayo kakuhle ukuba umKristu wokwenyani unjani ni.
uThixo ke wasebenzisa ezi zinto ukuze athethe nentliziyo yam, Ndaya kwiCamp yosapho, eyayikhokelwa yicawa yam. Intshumayelo kule Camp yayisoloko ibhekise, kubayeni, notata, nabafazi, kwaye noomama. Njengomfana owayengatshatanga ke ndandingayelanga ntshumayelo phaya. Ndandiye phaya ukuze ndonwabe nabahlobo bam.
Ndingalindelanga ke, ngobusuku bokuqala umshumayeli washumayela iVangeli. Ukufa kukaYesu Kristu ngenxa yezono zethu, nokungcwatywa nokuvuka kwakhe ekufeni. Washumayela ngesidingo sethu sokuzalwa ngokutsha. Washumayela ngemfuneko yenguquko, nokukholwa kuYesu Kristu.
Kuthe kwakuza isimemo, ndaxhathisa. igugu lam lakudala, lalingandivumeli ukuba ndivume ubuxoki endandibuphila. Ndagoduka ndaya ekhayeni lam ngobabusuku ndabe ndisalahlekile ezonweni zam.
Kwiiyure eziyi24 ezilandelayo zaba zezona zilusizi ebomini bam. Ndandikwazi ukuyibaleka ingcinga ethi, “James, ungumoni kwaye kufuneka usindiswe.”
Ndaphinda ndaya enkonzweni kwakhona ngobunye ubusuku. Xa umshumayeli waqhubekekayo waqala ukushumayela, waqala ngokuthetha into efana nale, “uMoya Oyingcwele undixelela ukuba kukho umntu osadinga ukusindiswa, ngoko ke phambi kokuba ndishumayele, sizakuqala ngokwenza isimemo.” Ndasazi ukuba uthetha ngam. Ekuqalekeni ngaqala ukuxhathisa. Kwakukho abantu abangaphezu kwe400 ababebhekabheka, bonke ke babecinga ukuba ndingumKristu. Kwakhona igugu lam landibambezela. Kodwa ukulunga kwakhe kwakunyanisekile, uThixo wasongeza isimemo ndade andakwazi ukuxhathisa kwaphela. Ndaya ngaphambili kwaye indoda yasecaweni yam yandithatha yaphuma nam, kwaye yandibuza ngoluhlobo, “Ingaba uyayazi na into ekufuneka uyenzile?” Ndaphendula, “Ewe”. Emva koko ndaguqa ngamadolo, ndabiza kuThixo ndiguqukile, kwaye ndinokholo, Wandisisa!
Namhlanje andikubuzi ukuba wakhe wathandaza ucela uThixo ukuba akusindise. Andikubuzi ukuba unalo uloyiko lwesiHogo na. Andikubuzi ukubangaba wakhe wasabela kwisimemo somshumayeli na. Ndiyakubuza wakhe, waguquka esonweni sakho, kwaye wabiza kwiNkosi uYesu Kristu ngokholo? Wakhe wabeka ithemba lakho kuye yedwa, ngenxa yosindiso lomphefumlo wakho? Ingaba wakhe, wazalwa ngokutsha?